Dhoofinta alaabada ceeriin ee beeraha iyo cunnada Ruushka laga soo bilaabo 2001-2019, rajooyinka 2020 - PotatoSystem
Meey 28, 10:55
в Analytics, Dhaqaalaha iyo falanqaynta
Khabiirrada Xarunta Xirfadlaha Cilmi-baarista Agribusiness "AB-Center" www.ab-centre.ru diyaarisay daraasad suuq-geyn Suuqa Ruushka ee alaabada ceeriin ee beeraha iyo cuntada sannadihii 2001-2020.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan dhoofinta alaabada dhoofinta alaabada beeraha iyo cunnada Ruushka
Dhoofinta alaabada ceeriin ee beeraha iyo cunnada Ruushka laga keenay 2019 waxay noqotay 24 milyan oo doolar, taasoo waxyar ka yar tan tirooyinka 741,4 (2018% ama 0,6 milyan).
* - Xaaladdan oo kale, annaga oo adeegsanaya alaabada ceeriin ee beeraha iyo cuntada waxaan uga jeednaa alaabada lagu daro kooxaha wax soo saarka laga bilaabo 01 illaa 24, qaybaha FEA ee howlaha dhaqaalaha shisheeye min I ilaa IV (eeg tixraaca koodhadhka HS).
Qaybta I - Xayawaanka nool; waxyaabaha xoolaha.
Qeybta II - Alaabada dhirta asal ahaan ka soo jeeda.
Qaybta III - Dufanka iyo saliidaha asalka xoolaha ama khudradda iyo waxyaabaha burburay; dufanka la cuni karo; dhukay xayawaanka ama asalka asalka.
Qaybta IV - Cunnooyinka la diyaariyey; cabitaanno khamri iyo aalkolo iyo khamri ah; tubaakada iyo waxyaabaha ku beddelaya (eeg buugga tixraaca ee koodhadhka HS).
Kooxo badan oo wax soo saar ah, Ruushka sanadka 2019 wuxuu si weyn u kordhiyay dhoofinta dhoofinta. Xaalufinta guud ee tilmaamayaasha ayaa guud ahaan la xidhiidha hoos u dhac ku yimid dhoofinta hadhuudhka (alaabada sida ku xusan xeerka HS 10) Arrintan ayaa loo aaneynayaa dalagyada dalagga oo hooseeya sanadka 2018, kaasoo saameyn ku yeeshay waxqabadka ganacsiga shisheeyaha qeybtii hore ee 2019.
Marka loo eego natiijooyinka 2020, waxaa suurtagal ah, in marka loo eego, doolarka dhoofinta alaabada ceeriin ee beeraha iyo cuntada laga keeno Xiriirka Ruushka, sababtuna tahay qiimeynta weyn ee ruble, ayaa sidoo kale noqon doonta mid aan caadi aheyn. Si kastaba ha noqotee, marka la eego xagga jirka (marka loo eego tan), shixnadaha waxaa la filayaa inay kordhaan inta badan noocyada alaabada.
Waqtigan xaadirka ah, cuntada loo dhoofiyo marka la eego qiimaha ayaa weli ka badan dhoofinta ay dhoofiyaan, laakiin farqigaani si tartiib tartiib ah ayuu u yaraanayaa. Sidii laga filaayay Xarunta AB, iyadoo la ilaalinayo isbeddelada hadda jira, dhoofinta cunnada ayaa laga yaabaa inay dhaaftay dhoofinta alaabada mustaqbalka dhow (sannadka 2020-2022).
Doorka alaabooyinka beeraha ee tirada guud ee dhoofinta Ruushka sanadihii la soo dhaafay si weyn ayey u kordhay.
Dhismaha agro-warshadaha waa mid ka mid ah aagaga yar ee qaybta dhabta ah ee dhaqaalaha ee ku jira Xiriirka Ruushka ee si guul leh u horumarsan oo leh alaabooyin ku tartama suuqyada adduunka. Sanadkii 2016-2019 saamiga badeecooyinka cunnada ee wadarta guud ee dhoofinta Ruushka, sida laga soo xigtay AB Center, waa 5,5-6,0%, halka laga soo laabtay 2001-2013. kama uusan dhaafin 3,4% (sanadaha qaarna wuxuu ka yaraa 2,0%).
Maqaalka muhiimka ah ee dhoofinta alaabada ceeriin ee beeraha iyo cuntada Ruushka laga keenay sannadka 2019:
1. Midho (alaabada sida uu qabo HS code 10). Kuwaani badanaa waa sarreen, shaciir iyo galley. Si aad u yar, bariis, galley, rooti, ​​iyo haro ayaa laga dhoofiyaa Ruushka. Sanadka 2019, dhoofinta hadhuudhka ee laga soo qaado Xiriirka Ruushka ee qadarka qiimaha ayaa ah 32,0% wadarta guud ee agabyada ceyriinka beeraha iyo cuntada dibedda (39 313,4 kun oo tan oo u dhiganta $ 7 908,5 milyan). Sannadka 2018, saamiga hadhuudhka wadarta guud ee gaarsiinta ayaa si weyn kor ugu kacday oo noqotay 42,0% (54 kun oo tan oo u dhiganta 814,5 milyan oo doolar).
2. Saliida saliidda, saliidda khudradda, gasacadaha saliidda, cuntada iyo harta kale ee adag ee laga helo soosaarka saliidaha khudradda. Alaabooyinkani waxay keenaan keenisyo gudaha qaab dhismeedka kooxaha wax soo saarka ballaaran (HS code) sida 12, 15 iyo 23, siday u kala horreeyaan. Wadarta qiimaha dhoofinta alaabada kor ku xusan, sida ku xusan xisaabinta Ab-Center, ayaa lagu sheegay 5 687,6 milyan USD (23,0% wadarta qiimaha dhoofinta alaabada ceyriinka iyo cuntada). Isbarbar dhig ahaan, 2018, tilmaamayaashu waxay ahaayeen heerar ah 4 milyan USD (516,8%).
3. Kalluunka iyo badda (HS code 03). Keenista dhoofinta ee kooxdan wax soo saarka ah ee 2019 waxaa lagu qiyaasay USD 4 milyan (698,9%). Sannadka 19,0, qiimaha dhoofinta kalluunka iyo kalluunka badda ee laga keenay Xiriirka Ruushka wuxuu u kacay USD 2018 milyan (4%).
Wadarta TOP-3 ee kooxaha wax soo saarka ee la soo korsaday ee kor ku xusan, marka loo eego qiyaasta AB-Center, ee la bixiyo sanadka 2019 73,9% dhamaan keenida marka loo eego qiimaha.
Waxyaabaha soo socdaa waa la xusi karaa:
4. Shukulaatada iyo waxyaabaha kale ee macmacaanka ay ku jiraan kookaha (HS code 18) - 2,9%.
5. Alaabada la dhammeeyay ee laga soo saaray badarka hadhuudhka, bur, istaarijka ama caano; Dhir macaan (HS code 19) - 2,8%.
6. Khamri iyo khamri aan cabin (HS code 22) - 2,5%
7. Hilibka (HS code 02) - 2,4%. La soco in aaggan uu si firfircoon u korayo. Sanad ka hor, saamiga hilibka ayaa ahaa 1,6%, sanadkii 2013 - kaliya 0,2%.
8. Tubaakada (HS code 24) - 2,2%.
9. Sonkor (HS code 17) - 2,1%.
10. Khudaarta (HS code 07) - 1,9%. Fikradeenna, nidaamka uqeybinta badeecadaha iyadoo loo eegayo HS markasta ma muujineyso sawirka dhabta ah.
Xaqiiqdii, asaaska u keenida sida ku xusan xeerka 07 waa digir iyo digaag, kuwaas oo aad ugu dhow hadhuudhka marka loo eego khudradda.
Si kastaba ha noqotee, kala-saaridda alaabta sida ku xusan koodhadhka HS, alaabooyinkaas waxaa loo kala saaraa sida khudradda. Dhoofinta khudaarta si toos ah (macnaha erayga caadiga ah) ee ka socda Xiriirka Ruushka ayaa ah heerar hoose.
Muhiim! Xisaabinta ganacsiga shisheeye ee agabkan waxaa loo diyaariyey iyadoo la adeegsanayo aaladda Diiwaanka tirakoobka kastamka VEDLORD.
qoraaga: Alexey Plugov, Ph.D.
Source: Khabiir ku takhasusay cilmi-baarista iyo Xarunta Falanqaynta "AB-Center"
Tags: soo dejinsoo dejinta beerahadhoofintaDhoofinta beeraha